भगवानसित कुरा गर्न भन्दै मन्दिरमा चढाइयो आइफोन !::kamananews
भगवानसित कुरा गर्न भन्दै मन्दिरमा चढाइयो आइफोन !
भगवानलाई एकसे एक महंगा उपहार चढाएको त सुनिएकै थियो । नगद पैसादेखि गहना र कपडा तथा बहुमूल्य सजावटका सामानहरु समेत मानिसले भगवानलाई चढाउँछन् । तर यहाँ एकजना मानिसलाई भगवानलाई जे चढाएका छन् त्यो अहिलेसम्मकै नौलो छ ।
हालै भारतमा एकजना व्यक्तिले मन्दिरमा भगवानलाई जे चिज चढाए त्यसले सबैलाई छक्क पार्‍यो ।
भारतको विजयवाडास्थित सुब्रमण्डा स्वामी मन्दिरमा रहेको दानपात्रमा हालै अहिलेसम्मै नचढाइएको वस्तु फेला पर्‍यो । दानपात्रमा त्यस्तो चिज फेला परेपछि मन्दिरमा तहल्का नै मच्चियो ।
वास्तवमा मन्दिरको दानपात्रमा आइफोन सिक्स एस फेला परेको थियो । दानपात्रमा आइफोन फेला परेपछि सुरुमा त पुजारीलाई त्यो नक्कली आइफोन होला भन्ने लाग्यो । तर पछि चेक गर्दा पो थाहा भयो, त्यो त सक्कली फोन रहेछ ।
मन्दिरको दानपात्रमा महंगो आइफोन सिक्स एस फेला परेको कुरा मन्दिरका कार्यकारी अधिकृतलाई गराइयो ।
मन्दिरको दानपात्रमा कसले आइफोन चढायो भन्ने खुलेको छैन । मानिसहरुले अनेक थरी अनुमान तथा हँसिमजाक गरिरहेका छन् ।
कतिपयको अनुमान छ की मोबाइल फोनको पसल सुरु गरेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यापार फलिफाप होस् भनेर भगवानलाई मोबाइल फोन चढाएको हुनसक्छ ।
कतिपयले चाहीँ भगवानसँग सीधै कुराकानी गर्नका लागि कसैले मन्दिरमा आइफोन चढाएको बताउने गरेका छन् । तर आइफोन चढाउने मानिस र त्यसको कारण चाहीँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । एजेन्सी
जब जहाजबाट पोखियो ३ हजार किलो सुनचाँदी… (भिडियोसहित)
आकाशबाट सुन वर्षिने बारेका अनेक काल्पनिक कथा कहानीहरु त सुन्नु भएकै होला । तर हालै साँच्चिकै आकाशबाट सुनचाँदी वर्षिएको छ । विश्वको सबैभन्दा चिसो ठाउँ रुसको साइबेरियामा हालै आकाशबाट केही चिज वर्षियो । त्यो हिउँ...
घोडाका लागि खुल्यो दुनियाँकै पहिलो पाँच तारे होटल
कतारका घोडाले पाएको सुविधाबारे चर्चा गर्दा धेरै मान्छेलाई इर्ष्या लाग्न सक्छ । किनभने यहाँको अल शाकब घोडचढी सेन्टरका घोडाहरुलाई फाइभ स्टार रिसोर्टको सुविधा दिएर राखिएको छ । जहाँ स्वीमिङपुल, ब्युटीपार्लर, जिमहल, सुत्केरी कक्ष र अत्याधुनिक...
यस्तो अचम्म बिहेअघि सासुको कुटाई खानुपर्ने अनौठो परम्परा (भिडियोसहित)
सोसल मिडियामा अहिले एउटा भिडियो खुबै चर्चित छ । भिडियोमा एकजना हट्टाकट्टा युवती हातमा लौरो लिएर उभिएकाे देखिन्छिन् । । एकजना पुरुष उनको अगाडि उभिएको छ । अचानक ती महिलाले हातमा रहेको लौरोले युवकलाई जोडसँग...
अचम्म लाग्ने !जब पक्राउ पर्ने डरले कर्मचारीले घुस लिएको नोट निलिदिए
एकजना कर्मचारीले घुस लिएको नोट नै निलिदिएका छन् । घुस लिएको आरोपमा पक्राउ पर्ने डरले उनले नोट निलेका हुन् । घटना भारतको हो । भारतको गुजराँतस्थित पाटन जिल्लामा यो घटना भएको हो । एकजना पशु...
पुरुषहरुमा, खासगरी युवाहरुमा छातिमा स्तनको आकार बढ्नुमा तेलको प्रभाव रहेको एक शोधले देखाएको छ । खासगरी लावेन्डर तथा चियाको तेलमा हुने रसायनका कारण युवाहरुमा स्तनको आकार बढिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । तेलमा हुने ८ प्रकारका...
जब एउटा कुखुरामाथि भिडे दुईवटा राज्य
स‌घीयतामा दुईवटा प्रान्तबीच के-के विषयमा विवाद हुनसक्छ भन्ने कुराको गतिलो उदाहरण हालै भारतका दुई राज्यले प्रस्तुत गरेका छन् । भारतका मध्यप्रदेश र छत्तिसगढ राज्यबीच हालै एउटा कुखुराको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । मासुको उत्कृष्ट स्वादका...
पत्याउनु हुन्छ ? यस्तो व्यक्ति, जो ३९ वर्षसम्म नखाई बाँचे
जीवनमा ३९ वर्षसम्म कुनै पनि ठोस पदार्थ नखाईकन कुनै मानिस बस्न सक्छ भन्ने पत्याउनुहुन्छ ? भारतको पुणेका एक मानिसले जीवनमा ३९ वर्षमा पहिलोपटक कुनै पनि ठोस खानेकुरा मुखबाट खाएको सुखद अनुभव गरेका छन् । राजेन्द्र...
आकर्षक देखिनका लागि महिलाहरु केसम्म गर्दैनन् । जिम, योगा, डाइटिंग तथा प्लास्टिक सर्जरी आदि । तर कतिपयमा सुन्दर देखिने नशा यति धेरै हुन्छ कि उनीहरुलाई प्लास्टिक सर्जरी गराउने लत नै लागेको हुन्छ । यस्तै एउटा...
विश्वकै सबैभन्दा सेक्सी नर्स अस्पतालमा बिरामी – पुरुषको भीड
एजेन्सी । ताइवानको एक अस्पतालमा पुरुष बिरामीहरुको थेगी नसक्नु लाइन लाग्ने गर्छ । त्यसको कारण भने अचम्मको छ । उनीहरु त्यहाँ राम्रो डाक्टर भएको कारण होइन, सेक्सी नर्स भएका कारण आउने गर्छन् । विश्वकै ‘सेक्सी...
भियतजेट एयरलाइन्स, जहाँ एयर होस्टेसले लगाउछन् बिकिनी ! बिकिनी आइडियाले थाओ बने अर्बपति
काठमाडौं, ६ चैत । एक भियतनामी एयरलाइन्स, जो एयरहोस्टेसको उच्छृंखल कपडाका कारण विवादमा आइरहन्छ । यो एयरलाइन्सलाई मानिसहरूले बिकिनी एयरलाइन्सका नामले चिन्ने गरेका छन् । एयरलाइन्सका एयरहोस्टेसले उडानको समयमा बिकिनी लगाउँछन् । एयरलाइन्सका अधिकांश एयरहोस्टेस...